ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု များပြားလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု များပြားလာ
ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း ယာဉ်တိုက်မှု များပြားလာ
Posted by ချစ်ရင်ထူး II on Dec 13, 2012 in Copy/Paste | 17 comments
ယခု သီတင်းပတ်အတွင်း မော်တော်ယာဉ် တိုက်မှု သိသိသာသာ များပြားလာကြောင်း တွေ့နေရပါသည် .. ပူပူနွေးနွေး 12.12.2012 ည ပိုင်းက ကျွန်တော်တို့မြို့ ရှိ စစ်တပ်မှ ကားနှင့် ဆိုင်ကယ် တိုက်ပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းသူမှာ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ ယနေ့ 13.12.2012 ညနေ 7.30 ၀န်းကျင်တွင် ဆိုင်ကယ်နှစ်စီးတိုက်မိပါတယ် ။
အဲဒီ အရင် ရက်များက အမဲသား သယ်ဆောင်လာသော ဆိုင်ကယ် နှစ်စီး တိုက်မိရာမှ တစ်ဦးမှာ ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးပြီး ကျန်တစ်ဦးမှာ ခြေထောက်ပြတ်/ ဖြတ်ရမလိုလို ဖြစ်နေပါတယ် ။
အဓိက ဖြစ်ရတာကတော့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ပါ ဆိုင်ကယ် အစီးအရေအတွက်များပြား လာတာက တစ်ကြောင်း ၊ ပိုက်ဆံရှိရင် ဆိုင်ကယ် ဝယ်စီး လိုက်တာပဲ ယာဉ်စည်းကမ်း တွေ လမ်းစည်းကမ်းတွေ နားမလည် တာက တစ်ကြောင်းပါ ။ မြို့မှာ လမ်းက ကျဉ်းမြောင်း သည့် အပြင် အရှိန်ပြင်းစွာ မောင်းနှင်မှု ၊ မကျွမ်းကျင်ဘဲ မောင်းနှင်မှု စက်ချို့ယွင်းမှု လမ်းမညီညာ မှု တွေ အများအပြား ရှိနေခြင်းကလည်း ယာဉ်တိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်း တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါစေ ကိုယ်က ကားမောင်းရင် ဆိုင်ကယ်သမား မှားသည်ဖြစ်စေ မှန်သည် ဖြစ်စေ ကိုယ်က လျှော်ပေး ရတဲ့ ထုံးစံ( ယာဉ်ကြီး နှင့် ယာဉ်ငယ်) ဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေခဲ့ ဖြစ်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီတော့ ကားမောင်းသမားတွေဘက်က လျှော်ပေးရတော့တာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လဲ ဆိုင်ကယ်သမားတွေ သေချင်သေမယ် မသေရင်လည်း ခြေပြတ် လက်ပြတ် ဆေးရုံတက်နေရမယ် ။
ကားမောင်းသမားတွေကရော တိုက်ချင်လို့တိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ တောဘက်ကို သွားရင် ဖုန်တွေက အထောင်းထောင်းထ နေတယ် ကားတန်းမောင်းတော့ ဆိုင်ကယ်သမားက လမ်းဘေးဆင်းပေးပါတယ် ဒါပေမယ့် ကားတန်းကုန်သွားပြီ ထင်လို့ ဆိုပြီး လမ်းပေါ်တက်လာတယ် တိုက်မိတယ် တိုက်မိတယ် ဆိုတာနဲ့ လျှော်တော့ ဆိုတာချဉ်းပဲ ။ ကျွန်တော်က ကားလည်း မောင်းပါတယ် ဆိုင်ကယ်လည်း မောင်းပါတယ် ။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ် လောက်က ကျွန်တော်တို့မြို့ကနေ ရန်ကုန်ကို သွားတဲ့ခရီးသည်တင် ကားတစ်စီး လူကို တိုက်မိတယ် တစ်ပိုင်းပြတ်သွားတယ်တဲ့ ။ ကောင်မလေးက အလျှူခံ မဏ္ဍပ်ကနေ ကားလာနေတာကို မသိဘဲ ထွက်လာတော့ …… ။
ကျွန်တော်ပြည် ကိုသွားတော့ ဒိုင်နာ ကားနဲ့ ခေါင်းခန်းကနေ လိုက်တယ် ဥသျှစ်ပင် နားမှာ လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးကို ရှေ့က ဆိုက်ကားဆရာ ကဖယ် မပေးဘူး ဟွန်းတီးလဲ မရ
ကားဆရာက လီဗာ နင်းပြီး တိုက်မယ်လုပ်မှ အတင်းဆင်းပြေးတယ် ။ ကားဆရာက ပြောတယ် “ ကျွန်တော့နောက်မှာ ကျွန်တော့ကားကို အားကိုးပြီး လိုက်လာတဲ့ ခရီးသည် 30 လောက်ရှိတယ် သူက ရှေ့ကနေ ဘယ်လိုလုပ်နေမှန်းမသိဘူး အရှိန်နဲ့ သူ့ကို ကွေ့ရှောင်လိုက်လို့ ဘေးကို ကျသွားရင် ကားမှောက်မယ် ခရီးသည်တွေ ဒဏ်ရာရမယ် ကျွန်တော် အချုပ်ထဲရောက်မယ် သူ့ကို တိုက်ရင်လည်း အတူတူပဲ ဆိုတော့ .. .. ”” ဆိုပြီး ပြောပြပါတယ် ။
ကျွန်တော်ကတော့ အရေးကြီးရင် တော့ မောင်းတယ် အဲလိုမှ မဟုတ်ရင်တော့ ဖြည်းဖြည်းပဲ မောင်းပါတယ် ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူပဲ မှားမှား ရှင်းရတဲ့ အချိန် ကြာတယ် ။ ခရီးဖင့် တယ် ။ ဖြည်းဖြည်းသွားတော့ အန္တရာယ်ကင်းတယ် ။
စာဖတ်သူ အပေါင်း လိုရာခရီးကို ချောချောမွေ့မွေ့ ရောက်ရှိနိုင်ကြပါစေ ။
ဒါကြောင့် အဲဒီ လေးမျိုးလုံးဘက်က ကြည့်လို့ရတယ်…
ကြည့်ရတာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ စည်းကမ်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း တွေးခေါ်ပုံတွေက
ကိုယ်စွမ်းကိုယ်စနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားစီးနိုင်တဲ့သူတွေကို မနာလိုဖြစ်လွန်းတဲ့စိတ်တွေက
ုပုံလောင်း ပေးလိုက်တာ ဖြစ်မယ်လို့ ကောက်ချက်ချမိတာပဲ……
ကျုပ်သာ ဥပဒေ စည်းကမ်းတွေကို ရေးဆွဲခွင့်ရရင်
အတိုက်ခံရသူမှားရင် အတိုက်ခံရသူကသေချာပေါက် ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ပြန်လျော်ရမယ်ဆိုတဲ့
အမှန်တကယ် တရားမျှတ တဲ့ ဥပဒေမျိုး ရေးဆွဲမိမှာ…
ဘယ်ဟာမှန်တယ် ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာလောက်တော့ အကြမ်းဖျင်းဆင်ခြင်နိုင်တာပေါ့….
ဒန် တန့်တန်…….. )
စိမ်း ၀ါ နီ
သတိ ဆီ ရေ လေ
သတိ ဟွန်းတီးပါ (ဟွန်းကလွဲရင် အသံစုံမြည်သဗျာ)
ရေ့ကိုက်တစ်ရာတွင် တံတားကျိုးနေသည် (မြန်မာနည်းပညာ နဲ့ဆောက်ထားတာမှဟုတ်ရဲ့လား)
သတိ လမ်းပြင်နေသည် (ပြင်ပြင် လုပ်ထားတုံးက မှမကောင်းတာ တစ်သက်လုံးသာပြင်ပေတော့)
တစ်နာရီ ၁၅ မိုင်ထက်လျော့မမောင်းရ (ဗရမ်းဗတာ ယာဉ်မောင်းတွေက ပေါးပါဘိသနှယ် အကုန်
တစ်နာရီမိုင် ၃၀ ထက်ပိုမမောင်းရ (စိတ်ချပါ လမ်းကမှ မကောင်းတာ ဘယ်သူကပိုမောင်းမှာလဲ)
သတိ ကျောင်းရှိသည် (ဘုန်းကြီးကျောင်းပြောတာလား ၀င်ပြီးဝပ်ချခဲ့ဦးမှပဲ)
လမ်းချော်သည် (ချော်မှာပေါ့ မြေသားလမ်းကြီးဟုတ်စာ)
ရှေ့ကိုက်တစ်ရာမှစ၍ လမ်းမကောင်းတော့ပါ(နေရာတိုင်းတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်)
ယာဉ်စည်းကမ်းနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဒါလေးတွေ ပြေးမြင်မိတယ်ဗျာ
ယာဉ်မောင်းတွေကလဲ စည်းကမ်းမရှိကြသလို လမ်းတွေကလဲ မစွံ့ပေါင်ဗျာ။
ရပ်ကွပ်ထဲ ကြည့်လိုက် လမ်းလေးများကောင်းနေရင် မှတ်ထား အဲ့ဒါ ပစ်တိုင်းထောင် လမ်းလို့ခေါ်တယ်
ကားတိုက်မှုတွေ များလာတာတော့ သိသိသာသာပဲ။
ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားသံတော့ မကြားမိသေးဘူး။
(လမ်းလျှောက်၊ ကားစီး ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်)
သမ္ဗုဒ္ဓေ ချည်း ဖိရွတ်နေမိတော့တာပဲ။ :buu:
အဲဒါလေးကို ကြိုက်ပါတယ် အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်ရမှာပါ ဒါပေမယ့် ဥပဒေ ရေးဆွဲတဲ့သူတွေက ကားမမောင်းဖူး လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ..
ဒီနေ့ လမ်းကြောအခြေအနေနဲ့ တွက်ပြီး အိမ်က ၀ိရိယထားစောထွက်ရင်
ခုတော့ အသဲအသန် ဖြတ်ကွေ့၊ ကျော်တက်၊ စွတ်ထွက်….ဆိုတော့
အခုတစ်လော ကားတွေကလည်းပေါ ဆိုင်ကယ်တွေကလည်းပေါ ဆိုတော့ လမ်းပေါ်ရောက်ရင် ကိုယ်ကလည်းမတိုက်မိအောင် သူများကလည်း ကိုယ့်တိုက်မသွားအောင် မနည်းသတိထားရတယ် ဖြစ်ပြီဆိုမှနှစ်ဖက်လုံးထိခိုက်ကြတာဘဲလေ
အေးအေးဆေးဆေးမလျှောက်ရပါဘူး ကားတိုက်မှာပူရ ဆိုက်ကားတိုက်မှာပူရ
ငါစီးလာတာဆိုက်ကားမှဟုတ်ရဲ့လား လူကိုတိုက်တော့မလို ကားကိုတိုက်တော့မလို
နားကိုပူနေတာပဲ စပါယ်ရာရဲ့ အသံ ခြေထောက်တွေလဲစုတ်ပြတ်နေတာပဲ အနင်းခံရတာ
ရသစုံကို ရတယ် ( ချယ်ရီပေးတဲ့ ရသစုံ ပိုစ်ဖြစ်လာသာကြည့်)
လူကြောက်ရ ရဲကြောက်ရ ဆိုက်ကားသမားကြောက်ရ ဘတ်စကားကြောက်ရ
ဟယ် စိတ်မကောင်းလိုက် ချာတူးရေ..။
အဆောင် ၅ – ၆၊ ဆိုတာမတော်တဆထိခိုက်မှု့ ခွဲစိတ်ကုသဆောင်ပဲ….
ဘယ်သူလဲ ဦးမိုက် ကျနော်နက်ဖန်ကျရင်အိုက်ကိုရောက်အုံးမှာ
ကုတင်နံပါတ်သိရင်ပြောပါလား ၀င်နှုတ်ဆက်ရအောင် …
သမီးတို့ အိတုန်တို့ ဘော်ဘော်ထဲကပဲဟာ….
ကျုပ်တို့ မြို့ က ဘောစိတွေကတော့
သူရို့ သားသမီးတွေအတွက် ကားတစ်စီးစီ ဝယ်စီးခိုင်းတော့တယ်
ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပဲ သွားလာနေရတဲ့ ကျုပ်လိုလူတွေဟာ
ကလေးမောင်းတဲ့ကား ကို ရှောင်နေရတာကလား
ပြည်ရန်ကုန်လမ်းမှာတခါကအိမ်ပြန်တော့ လမ်းမှာစီးလာတဲ့ကားက လမ်းပေါ်တက်လာတဲ့နွားကို ကြိုးစားပြီရှောင်လိုက်ပေမယ့် ရှေ့ပိုင်းကတော့လွတ်သွားပြီးနောက်ပိုင်းနဲ့ပွတ်ဆွဲမ်ိပါတယ် ကားလည်းယိမ်းထိုးသွားတယ်လေ နွားလေးခမျာလည်း ခြေထောက်ကျိုးသွားရှာတယ်လေ။ မထနိုင်တော့ဘူး။
ကားကဟိုင်းဝေးကားမြို့ပြင်ဘက်ဆိုတော့ အရှိန်နဲ့မောင်းလာတုန်းဗြုန်းဆိုနွားက လမ်းပေါ်တက်လာတာ
နောက်မှာလူပါတယ် ကြိုးလေးဘာလေးနဲ့ဆွဲလာတာမဟုတ်ဘဲ ဒီတိုင်းမလာတာ တော်တော်ပေါ့ဆတဲ့သူတွေ
ကားပေါ်မှာ ကလူလေးဆယ်လောက်ပါတယ် အကုန်လုံးထိတ်လန့်ကုန်တယ် အဲဒိမှာပဲဇာတ်လမ်းကစပါတော့တယ်။ ပိုင်ရှင်ကလျှော်ပါပေါ့ ကားသမားကလည်းလျှော်မယ်ပေါ့ လျှော်နိုင်မယ့်မမာဏကို ပိုင်ရှင်ကမကျေနပ် အုံနာကိုဖုန်းဆက်
အို ကြာလိုက်တာကိုလွန်ရော ကားပေါ်ကလူကြီးတွေက၀င်ပြောပေးတယ်ကျေနပ်လိုက်ပါ
လျှော်မှာလားလို့မေးပစ်လိုက်တယ် ဒါလဲမရဘူးဗျ ပြသနာရှာတာပဲ။
အုံနာလိုက်လာမှပဲ သူတို့ရှင်းကျန်ခဲ့ပြီး ကားထွက်ရတော့တယ်။
သြော် လူတွေ လူတွေ အသိဥာဏ်တွေ နည်းပါးကုန်ကြပြီထင်ပါတယ်။
အဝေးပြေး လမ်းမပေါ်ကို နွားဆွဲပြီး တက်လာပြီး ၊
နွား နှင့် အဝေးပြေး ကား တိုက်မိလို့ကတော့ ၊
နွားပိုင်ရှင် လျှော်ရမှာပဲ ။
ကားလမ်းပေါ် နွားတက်ခွင့်မှ မရှိတာ ။
အဘဖောခင်ဗျ ဒီမှာကတော့ နွားပိုင်ရှင် နွားကျောင်းတဲ့သူက ဘုကြည့်ကြည့်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် ဆဲတောင်ဆဲသေးသမျှ။ ကားလမ်းပေါ်နွားဖြတ်လို့ကတော့ ကားသာအရှိန်လျော့မောင်းရ ပါရောလား၊ တိုက်မိရင် မလွယ်ရေးချ မလွယ်ပါဗျ။